Bathabile Dlamini ehla esikhundleni, usugugile, kusho owe-ANCYL | isiZulu
Bathabile Dlamini ehla esikhundleni, usugugile, kusho owe-ANCYL
UBathabile Dlamani akeneme ngeTop 6 ye-ANC 'egcwele amadoda'
Abantu abaxole njengoba baxola nakuhulumeni wobandlululo - Dlamini
Johannesburg - Ilungu lesigungu esiphezulu kwi-ANC Youth League (NEC) uBavelile Hlongwa litshele umengameli wophiko lwabesifazane kwi-ANC uBathabile Dlamini nezinye izikhulu zakhe ukuba kumele behle ezikhundleni, bayekele kungene abesifazane abasha.
UHlongwa ubekhuluma ngoLwesine ebusuku kwiYoung Women's Dialogue e-East London City Hall‚ nokuyilapho etshele khona uDlamini nezikhulu eziphezulu zalolu phiko ukuba abanye babo kumele ngabe sebephumule emakhaya manje.
UHlongwa uphinde wagxeka uphiko lwabesifazane ngokwehluleka ukwethula uNkosazana Dlamini-Zuma engqungqutheleni yenhlangano yokukhetha ubuholi eNasrec.
OLUNYE UDABA: Kudutshulwe kwabulawa owesilisa erenki yamatekisi
Kunalokho, uthe, abesifazane bahlukene phakathi ngenxa yabantu besilisa.
"Sikhathele… Abanye benu kumele ngabe sebephumule emakhaya manje ngoba senibadala, namadolo enu eseyehluleka ukunithwala, kodwa anifuni ukusinikeza ithuba, ngakho sizonitshela ngqo,” kusho uHlongwa etshela uDlamini namanye amalungu e-NEC ebebehlezi etafuleni eliphezulu.
"I-ANC Women's League isalele ngemuva kakhulu emzabalazweni, futhi uma ningasiniki izintambo, ngeke kuphumelele ukulwisana nobuqembuqembu kwi-ANC. Nehlulekile ukunikeza abesifazane abasebasha ithuba lokufunda kinina.”
Kusathungathwa abahlasele badubula izelamani zaseMkhobosa
Izelamani ezine zakwaMhlongo eMkhobosa, eSikhaleni zihlaselwe zabulawa yiqulu lamadoda angaziwe ngoMgqibelo ebusuku.
Umama unikeze izingane zakhe oshokoledi abanoshevu
Owesimame kanye nezingane zakhe ezimbili bashonile ngemuva kokudla ushevu.
Kushone owesimame oyedwa engozini eyenzeke eThekwini
Kushone oyedwa kwalimala omunye ngesikhathi kushayisana izimoto ku-M4 ngaseQuality Street eThekwini ngoLwesihlanu ebusuku.
'Indodana yami ingcono kunabadlali abaningi abagijima kwi-PSL'
Angeniswe esibhedlela amadoda ashaywe wumphakathi
Uyalulama unkosikazi kaMengameli ngemuva kokuhlinzwa
EZINGENA MANJE: U-Abrahams umemezee ukuthi uzoshushiswa uZuma
Cpt: 16-23°C Pta: 14-24°C
Jhb: 13-20°C Bloem: 13-22°C
Dbn: 17-24°C PE: 16-26°C
Cape Town - 15:07:30 PM SLOW MOVING TRAFFIC on the Elevated Freeway Ezinye zasemigwaqeni